Miyay Chelsea Weeraryahan Kala Saxeexanaysaa Suuqa Bishan January Kaddib Dhaawacii Tammy Abraham? Tababare Lampard Ayaa Ka Jawaabay Su'aashan Culus. - Gool24.Net
Miyay Chelsea Weeraryahan Kala Saxeexanaysaa Suuqa Bishan January Kaddib Dhaawacii Tammy Abraham? Tababare Lampard Ayaa Ka Jawaabay Su’aashan Culus.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hadlay suurogalnimada ay kooxdiisu weeraryahan kula soo saxeexanayso bishan January kaddib dhaawac xalay loo saaray weeraryahanka dookha koowaad ee kooxdaas ee Tammy Abraham.
Kaddib markii ay Arsenal kasoo kabatay hoggaan 1-0 ah oo ay Chelsea lahayd iyo markale 2-1 oo ay 2-2 ku qabteen Blues iyaga oo 10 xiddig ku ciyaarayay wakhti dheer ayaa dhalisay in taageerayaasha Chelsea ay baahidii ugu weyneyd suuqa u muujiyaan.
Marka laga yimaado inay dhibco lumiyeen, Xaalad kale oo waji gabax ku ahayd Chelsea ayaa ahayd inay dhaawac ku waayeen Abraham oo xilli ciyaareedkan ah xiddiga ugu goolasha badan safkooda.
Si kastaba, Lampard oo kulanka kaddib markale wajahay su’aalo ku saabsan arrimaha suuqa ayaa qalbi jab weyn ku riday taageerayaasha kooxdiisa kaddib markii uu sheegay inuusan wax badan ka rajaynayn suuqa bishan.
Frankie ayaa yidhi “Waan ogahay meesha aanu uga baahanahay xoojinta, Laakiin suuq adag ayuu anaga nagu yahay, Malaha suuq wakhti gaaban ayuu intaas in ka badan nagu yahay”.
“Waxa uu xilli ciyaareedkani na siiyay ee uu sii wado inuu na siiyo waa jawaabo garoonka dhexdiisa ah iyo boosas aan filayo inaanu sidan kaga wanaagsanaan karno, Taasi waa mid aniga ii taala inaan saxo laakiin maaha in badan suuqan”.
Xiddiga dookha labaad ee weerarka Chelsea ayaa ah Mitchy Batshuayi balse waxa uu wali shaki ka taagan yahay awoodiisa gool dhalineed ee joogtaynta goolasha.